अमेरिकामा कान्छी प्रदर्शन गर्न पुगेकी श्वेता भन्छिन् : माझी बस्ती निर्माणपछि अर्को फिल्म – Everest Times News
अमेरिकामा कान्छी प्रदर्शन गर्न पुगेकी श्वेता भन्छिन् : माझी बस्ती निर्माणपछि अर्को फिल्म
२०७५ भाद्र २, शनिबार २१:३१
अभिनेत्री श्वेता खड्का कान्छी फिल्मबाट चर्चामा छिन् । १० वर्ष अघि नेपाली फिल्मी उद्योगमा प्रवेश गरेकी उनी यतिबेला यही फिल्म विश्वभर प्रदर्शनका लागि व्यस्त छिन् । उनै अभिनेत्री खड्कासँग अमेरिकाको न्युयोर्कमा फिल्म प्रिमियरका लागि आइपुगेका बेला एभरेस्ट टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानी :
कान्छी फिल्मको बारेमा केही बताइदिनुस न, बजेट कतिको लाग्यो ?
बजेट हेरेर फिल्म बनाइनँ । फिल्म हेरेर बजेट खर्च भयो । अलि हाइ नै भयो फिल्म । दर्शकलाई रिफ्रेस होस । जसरी होस बेस्ट होस भन्ने मेरो चाहना हो । ५५ दिन मुस्ताङ बस्यौं । कुनै दिन त बाटोमा पहिरो खसेर खाना समयमा आउदैन थियो । मौसमले निकै च्यालेन्ज ग¥यो । गाडीको यात्रा त्यस्तै डरलाग्दो । टिम मेम्बरले एकदमै दुःख गर्नुभयो । चिच्याउनुपथ्र्यो जुका लाग्दा । धैरैपटक रिफ्लेकटरहरु हावाले च्यातिदियो पनि । दुःखको फल राम्रो हुने रहेछ । यसरी दुःख गरेकैले फिल्म राम्रा बन्यो जस्तो लाग्छ ।
कान्छी न्युयोर्कमा प्रदर्शन गर्न आउनु भयो कस्तो लागिरहेको छ ?
सबैभन्दा पहिले त म रहरले बनेको कलाकार होइन । मलाई अरुले ल्याएर आएको हो । जबरजस्त आएको जस्तो लाग्थ्यो । त्यसपछि छोडेर जान मन लागेन । दर्शकको माया पाएर यो क्षेत्रबाट टाढा जान दिएन । धेरै मुभिमा काम पनि गर्न पएन ।
कोहिनुरमा प्रोड्युरको भूमिका पाए । त्यसमा धेरै कुरा सिके । त्यसपछि एक्सिेडेन्ट भयो । जुन कुरा सबैलाई थाह नै छ । फिल्म इन्ड्रस्टीमा लागेकैले मैले यति धेरै दर्शक पाएकी छु । म भाग्यमानी रहेछु । यो क्षेत्रमा मैले केही गर्नैपर्छ । यो यात्रामा मलाई ल्याउने बुवा र श्रीमान दुबैको सपोर्ट छ । वसन्त डान्स सेन्टर यहाँ छ । उहाँले मलाई कलाकार बनाउनुभयो ।
न्युयोर्कमा यस्तो अवसर पाउनु मेरो लागि ठुलो सफलता हो । आफूले गरेको काम यस्तो व्यस्त व्यक्तिहरुले हेर्नुभयो । यही नै मेरो लागि सफलता हो ।
न्युयोर्कमै प्रिमियर गर्नुको कारण ?
जसको कारणले म कलाकार भएँ । फस्ट डे मा मलाई फिल्मको अफर गर्नुभयो । म एक्टिङ गर्न सक्दिनँ भन्दा पनि उहाँले मलाई यस्तो कलाकार बनाउनुभयो । त्यसैले मेरो गुरु भएको ठाउँबाटै मैले गरेको काम शुरु गर्न चाहे । अरु चाहि माझी बस्ती बनिरहेको छ । सीमान्तकृत बस्तीमा न त सरकारको न त कुनै आइएनजिओको ध्यान गएको थियो । म उता गएर काम थालेको काम सकेको छैन । यो पूर्ण गर्नका लागि सहयोग खोज्न पनि म यहाँ आएको हुँ ।
फिल्म अनि फाउन्डेसन, कसरी शुरु भयो यो फाउन्डेसन ?
मेरो जीवनमा ट्राजेडी मोमेन्ट आयो । अहिले ४ वर्ष भइसक्यो । २ वर्ष त सम्हालिन गाह्रो भयो । त्यसपछि सम्हालिन थाले । अरुका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । जति सम्पति कमाएपनि केही नहुने रहेछ । तर आफूले कमाएको अरुलाई सहयोग गर्न पाए त्यो नै ठुलो कुरा हुने रहेछ । मलाई शुरुमा घरबाट गाली आएको थियो । यत्रो करोडौको प्रोजेक्ट सकेन भने मान्छेले कुरा काटछन् भनेर । तर मैले हारिनँ । अहिले धेरैको सहयोग पाएँ । काम सकिदैछ ।
सहयोग कतिको पाइरहेको छ, कसरी बनेको छ माझी बस्ती ?
सिन्धुपाल्चोकको माझी वस्तीमा ५३ वटा घर बनिरहेको छ । चिल्ड्रेन पार्क, ढल अदि इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागि २ करोड जति लाग्छ होला । घरको लागि प्रत्येक घरका लागि ११ लाख लाग्ने छ ।
सानो सानो सहयोग पाइरहेका छौ । बैंकबाट २ प्रतिशतमा ऋण लिएर काम भइरहेको छ । सरकारले दिएको ३ लाख पनि त्यहाँ समावेश हुन्छ । त्यति सपोर्ट पाइरहेको छैन ।
सपोर्ट त्यति छैन, तैपनि आँटिरहनुभएको छ ?
म भविष्यमा विश्वास गर्दिनँ । आजका लागि विश्वास गर्छु । फिल्ममा पनि लगानी गर्छु । समाजसेवामा पनि लाग्छु । माझीबस्ती निर्माण पुरा गरेरै छाड्छु ।
तपाईलाई सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?
फाउन्डेसनको वेबसाइटमा पनि होल डिटेल छ । श्वेता खड्काको अफिस काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित राइजिङ मलमा छ । यहाँ मेरो कफी सप पनि छ । मलाई भेटेरै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । फेसबुक पेजबाट पनि म्यसेज गर्न सक्नुहुन्छ । अमेरिकामा वसन्त डान्स सेन्टरबाट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
कान्छी पछिको प्लान के छ ?
कान्छीको प्रदर्शनमा व्यस्त छु । त्यसपछि एक वर्ष त माझी बस्ती कम्प्लिट गर्न लाग्छ । यो बनिसकेपछि म अर्को फिल्म प्रोजेक्टमा काम गर्छु । यसका लागि नेपाली सहयोगीहरुको खाँचो छ । मलाई होइन, फाउन्डेसलाई सहयोग गरिदिनुहोला ।